Somaliland oo cafis u fidisay in ka badan 500 maxaabiis - Somali
Qofkii ugu horreeyay oo Sucuudiga ugu dhintay cudurka Corona
Dal ay ku nool yihiin 1.3 bilyan qof oo banddow lagu soo rogay
Somaliland oo awood ciidan u adeegsaneysa ka hortagga cudurka Corona
Sweden: Xildhibaan ka warramaya xaaladda soomaalida cudurka Corona
Kiisaska cudurka Corona ee Jabuuti oo kordhay
Xiisad ka taagan duleedka Kismaayo
Posted at 12:06 31 Maarso 202012:06 31 Maarso 2020
Intee ayay qaadan kartaa in la helo tallaalka fayraska Corona?
Video caption: Dadka waxay is wedinayaan waqtiga uu qaadan karo in tallaal loo helo Coronavirus.Dadka waxay is wedinayaan waqtiga uu qaadan karo in tallaal loo helo Coronavirus.
Posted at 11:18 31 Maarso 202011:18 31 Maarso 2020
Sida ugu fudud ee aad ku ogaan karto in aad qabto cudurka Coronavirus
Video caption: Sida ugu fudud ee aad ku ogaan karto in aad qabto CoronaVirusSida ugu fudud ee aad ku ogaan karto in aad qabto CoronaVirus
Posted at 9:44 31 Maarso 20209:44 31 Maarso 2020
Magaalada KismaayoImage caption: Magaalada Kismaayo
Wararka laga helayo gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in xiisad dagaal ay ka taagan tahay duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalameen miliishiyo beeleedyo hubeysan oo deegaanka wada dagan.
Odayaasha iyo culimada deegaanka ayaa wada dadaallo lagu doonayo in lagu aaso maydadka dhawr iyo toban qof oo ku dhintay dagaaladii shalay ka dhacay aaggaasi kuwaas oo yaalla halkii dirirtu ka dhacday sida uu BBC-da u sheegay mid kamid ah culimada magaalada ee wadahadallada ku lugta leh.
Inkasta oo ay socdaan dadaallada lagu doonayo in lagu aaso maydadka dadkii ku dhintay dagaaladii shalay ayaa haddana waxa dhinaca kale socda is urursi ay sameynayaan kooxaha dagaalka ku lugta leh.
Dagaallada u dhexeeya miliishiyo beeledyada ee ka dhacaya duleedka Kismaayo ayaa soo noqnoqday dhawrkii bilood ee la soo dhaafay, waxana horey u guuldareystay dhawr heshiis oo dhinacyada is haya la dhex dhigay.
Posted at 8:31 31 Maarso 20208:31 31 Maarso 2020
Tanzania oo xaqiijisay qofkii ugu horreeyay ee u dhintay cudurka Covid-19
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Tanzania ayaa shaaca ka qaaday qofkii ugu horreeyay ee uu dhintay cudurka Covid-19 ee ku dhaca neefmareenka kaas oo sababa feyraska.
Qofka cudurka u dhintay wuxuu u dhashay Tanzania, waxaa uu qabay xannuuno kale.
Tanzania waxay xaqiijisay 18 qof oo uu ku dhacay coronavirus halka hal qofna uu ka kacay.
Posted at 8:13 31 Maarso 20208:13 31 Maarso 2020
Madaxweyne hore oo Afrikaan ah oo u dhintay Coronavirus
Joachim Yhombi-Opango (Bidix) wuxuu u cararay Faransiiska sannadkii 1997Image caption: Joachim Yhombi-Opango (Bidix) wuxuu u cararay Faransiiska sannadkii 1997
Madaxweynihii hore ee Congo, Jacques Joaquim Yhombi-Opango ayaa ku dhintay magaalada Paris kaddib markii uu ku dhacay cudurka Corona.
Waxaa uu jiray 81, qoyskiisa waxay sheegeen inuu xanuunsaday markii uu ku dhacay feyraska Corona.
Mr Yhombi-Opango wuxuu Congo ka talinayay sannadkii 1777-dii ilaa 1979-kii, xilliggaas oo xukunka ka tuuray madaxweynaha haatan xilka hayo ee Congo Denis Sassou Nguesso.
Sannado badan ayuu xirnaa, wuxuu noqday ra'iisul wasaare tan iyo sannadkii 1997-dii oo uu dalkaas ka qarxay dagaallo sokeeye.
Wuxuu u cararay dalka Faransiiska ka hor ina uusan kusoo laaban dalkiisa halkaas muddo 10 sanno ah uu dibad joog ahaa.
Posted at 14:32 30 Maarso 202014:32 30 Maarso 2020
Madaxda IGAD oo shir ay muuqaal ku galeen uga hadlay Covid-19
Madaxda IGAD ee shirka deg deg ah yeeshayImage caption: Madaxda IGAD ee shirka deg deg ah yeeshay
Madaxda ka tirsan Urur Goboleedka IGAD ayaa maanta shir muuqaal ah oo toos ah kaga hadlay cudurka Coronavirus ee saameeyay dalal ka tirsan gobolka.
Waxayna ka wada hadleen dadaallada looga hortaggayo cudurka Covid-19.
Madaxda ka qeybgashay shirka waxaa kamid ah, Ra'iisul wasaaraha Suudaan, Cabdalla Xamdook, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweyne ku-xigeenka South Sudan, Riek Machar iyo Ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeyb galay shirkaImage caption: Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeyb galay shirka
Posted at 13:02 30 Maarso 202013:02 30 Maarso 2020
Somaliland oo karantiishay dad looga shakiyay Coronavirus
Cabdiraxmaan Cabdullaahi SayliciImage caption: Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda goonni isu taageeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegay in ay ka war sugayaan xukuumadda Jabuuti si loo xaqiijiyo dadka ay sheegeen inay xadka ka tallaabeen oo ay qabaan cudurka Coronavirus.
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa intaasi ku daray in ay hayaan dad ay cudurkaasi uga shakiyeen oo ay ka qaadeen baaritaan kaas oo natiijadiisa la sugaayo.
Cabdiraxmaan Saylici oo sidoo kale ah guddoomiyaha guddiga ka hortaga Coronovirus ayaa ka dhawaajiyay in dadkaas la karantiilay ay gaarayaan 6 qof.
Posted at 12:32 30 Maarso 202012:32 30 Maarso 2020
War deg deg ahTirada kiisaska cudurka Corona ee Kenya oo kordhay
Kenya waxay xaqiijisay 8 qof kale oo uu ku dhacay cudurka Coronavirus, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaas,Mutahi Kagwe.
ilaa iyo hadda waxay Kenya xaqiijisay 50 kiis oo cudurka Corona ah.
Wasiirka wuxuu sidoo kale sheegay inay u muuqato in cudurka uu ku faafayo gudaha dalkaas.
Posted at 11:51 30 Maarso 202011:51 30 Maarso 2020
Nin looga shakiyay in 40,000 qof uu qaadsiiyay Coronavirus oo dhintay
Gobolka Punjab wuxuu xaqiijiyay 30 qof oo uu ku dhacay cudurka CoronaImage caption: Gobolka Punjab wuxuu xaqiijiyay 30 qof oo uu ku dhacay cudurka Corona
Mas'uuliyiinta ku sugan gobolka Punjab ee dalka Hindiya ayaa karantiilay 40,000 qof oo ka kala soo jeedo ilaa 20 tuulo kaddib markii lala xiriiriyay inuu cudurka qaadsiiyay waddaad u dhashay dalkaas.
Waxaana arrintan la ogaaday markii uu geeriyooday waddaadka 70 jirka ah.
Waddaadkan ayaa iska dhaga tiray inuu si iskiis ah isu karantiilo kaddib markii uu kasoo laabtay safar uu ku tegay dalalka Talyaaniga iyo Jarmalka, sida saraakiil ku sugan dalkaas ay BBC u sheegeen.
Ninkan oo magaciisu lagu sheegay Baldev Singh ayaa wuxuu booqday munaasabad diimeed ay lahaayeen bulshada Sikha ee dalkaas ka hor inta uusan geeriyoon waddaadka.
Munaasabadda oo lix maalmood socotay waxaa maalin kasta ka qeyb galayay 10,000 qof.
Toddobaad uun kaddib markii uu geeriyooday waddaadka, 19 kamid ah qoyskiisa ayaa laga helay cudurka Coronavirus.
"ilaa iyo hadda, waxaa inoo suurogashay in aan soo qabanno 550 qof oo la kulmay ninkan, waxaana sare u kacaya tirada dadkaas, waxaan xirnay tuulooyinka ku hareereysan meelihii uu booqday" waxaa sidaas BBC u sheegay sarkaal sare oo ku sugan gobolkaas.
Hindiya waxay xaqiijisay 640 qof oo uu ku dhacay cudurka Corona, 30 kamid dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Punjab.
Posted at 9:50 30 Maarso 20209:50 30 Maarso 2020
Sucuudiga oo sii deynaya maxaabiis
Libya waxay xaqiijisay 8 qof oo uu ku dhacay coronavirusImage caption: Libya waxay xaqiijisay 8 qof oo uu ku dhacay coronavirus
Sacuudi Carabiya waxay amar ku bixisay in xabsiyada laga sii daayo 250 qof oo loo heysto inay galeen dambiyo fudud.
Waxaa sidoo kale tallaabo noocan ah ku dhawaqaay dalalka Baxreyn, Masar iyo Suuriya, Iiraan waxay sidoo kale sii deysay maxaabiis si looga hortaggo cudurka Corona, inkasta oo ay jiraan maxaabiis baxsatay.
Liibiya ayaa kamid noqotay dalalka shaaca ka qaaday sii deynta maxaabiista si looga hortaggo in cudurka uu ku faafo dalkaas.
Dowladda uu caalamka ictiraafsan yahay ee Libiya ayaa amar ku bixisay sii deynta in ka badan 400 maxbuus.
Posted at 9:13 30 Maarso 20209:13 30 Maarso 2020
Coronavirus: Diyaarad dusha kala socotay banddowga Suudaan oo lasoo riday
Khartuum waxaa lagu soo rogay banddowImage caption: Khartuum waxaa lagu soo rogay banddow
Ciidammada ilaalada madaxtooyada Suudaan ayaa soo riday mid kamid ah diyaaradaha aanan cidna wadin taas oo la sheegay inay dusha kala socotay banddow lagu soo rogay dalkaas si looga hortaggo faafitaanka cudurka Coronavirus, sida laga soo xigtay wargeyska Al-Saxya.
Ciidammada ayaa soo riday diyaaradda xilli ay Jimcihii mareysay hawada guriga uu deganyahay madaxweynaha Suudaan, Janaraal Cabdul Fataax Al Burhaan, sida uu wargeyska sheegay.
ilo xog-ogaal ah ayaa wargeyska u sheegay in diyaaradda Drones-ka ay lahaayeen ciidammada amniga ee Suudaan taas oo waday howgal ay dusha kala soconeyso banddowga lagu rogay dalka Suudaan Isniintii lasoo dhaafay balse ay u gudubtay marin khaldan.
Bog 1 of 8